Charming Beijing Tourism Mharidzo yakabudirira kuitirwa muCopenhagen
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » Charming Beijing Tourism Mharidzo yakabudirira kuitirwa muCopenhagen
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • tsika nemagariro • Denmark Kuputsa Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Charming Beijing Tourism Mharidzo, chimwe chezviitiko zvakakosha mukati mehurongwa hweChina-Denmark Yekushanya Gore ra2017, rakaitirwa neBeijing Municipal Commission yeKushanya Kwekushanya, rakaitwa musi wa14 Nyamavhuvhu muCopenhagen. Vanoda kusvika zana vanhu vanobva kuEmbassy yeChina kuDenmark, Wonderful Copenhagen nevamiriri vevashanyi venzvimbo nevatori venhau vakapinda chiitiko ichi.
Hu Hongbo, Mutevedzeri Mukuru weMishinari weChinese Embassy muDenmark; Rwiyo Yu, Director-General weBeijing Commission yeKomisheni yeKusimudzira Tourism; Lars Thykier, Managing Director weSangano reDanish Travel Agents neVashanyi Vanoshanya, naPhilip Wenzel Kyhl, Senior Project Manager-China weWonderful Copenhagen vakataura pamusangano. Cui Hua anobva kuBeijing Municipal Commission yeKushanya Kwekushanya, akapa hurukuro pazvinhu zvekushanya zveBeijing pamwe nekutsigira zvivakwa nemasevhisi anosanganisira zvekufambisa, pekugara, zvekudya nezvimwe .; naIvan Xu, Deputy Managing Director weDepost Marketing Dhipatimendi, CYTS International Travel Co, Ltd. yakaunza nzira dzekufamba kweBeijing uye zvigadzirwa zvakadzama.
Rwiyo Yu akaudza vatori venhau, Mutungamiri weChinese Xi Jinping akataura mumusangano wake neDanish Prime Minister Anders Fogh Rasmussen muna Chivabvu kuti 2016 raive Gore reBudiriro uye 2017 raizove Gore reKukohwa kweChina-Denmark kudyidzana kwakabatana. Parizvino, nekudzika kwakadzama kwezviitiko, nyika mbiri dzakanakidzwa nekubatana kwepedyo uye kazhinji kuchinjana kwevanhu-kune-vanhu.
1,059,000 vashanyi vekuEurope vakashanyira Beijing muna2016 uye 479,000 muhafu yekutanga yegore ra2017. Pakati pavo, huwandu hwevashanyi veDenmark vanoenda kuBeijing vanoramba vachiwedzera uye Denmark yave musika wakakosha wevashanyi weBeijing. Beijing neCopenhagen vakasimbisa zviri pamutemo hukama hwemaguta ehanzvadzi muna Chikumi, 2012, uye pari zvino kune gumi nemashanu vakaroorana vematunhu (maguta) pakati peChina neDenmark. Vazhinji vashanyi veDenmark vachange vachiuya kuBeijing uye vangangoita mazana maviri nemakumi maviri nemaviri evashanyi veChinese vachange vachishanyira Denmark mu15.
Pamberi pehurukuro iyi, vamiriri vacho vakaita hurukuro naWonderful Copenhagen kuti vaite Memorandum ye Tourism Cooperation yakasaina zvese muna 2016. Vakakurukura misoro yekuwedzera kusimbisana kwemashoko nekushambadzira kwemusika, uye vakazosvika pakubvumirana.
Ichi chiitiko zvakare chinounza keteni pasi pe "Charming Beijing" zviitiko zvekusimudzira muNorth Europe inoitwa neBeijing Municipal Commission yeKushanya Kwekushanya. Vatumwa vakaita zviitiko zvakateedzana muHelsinki, Reykjavik neOdense.